सुमेरु सहकारीमाथि सीआईबीको नजर, हुनेछ अर्को बबाल - Dainik Nepal
सुमेरु सहकारीमाथि सीआईबीको नजर, हुनेछ अर्को बबाल
दैनिक नेपाल २०७८ असोज २१ गते १७:१०
काठमाडौं, २१ असोज । सहकारीको नामुद ठगी काण्डमा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पक्राउ परेसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि. पुल्चोक ललितपुरमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेका छन् ।
रुमेरुका अध्यक्ष भरत महर्जन हुन् । महर्जनले को–अपरेटिभको पैसा कसरी खर्च गरेका छन् ? भनेर बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । महर्जनले सुमेरु ग्रुपका नाममा ११ वटा संस्था चलाउँदै आएका छन् ।
इच्छाराज तामाङले पनि सहकारीको पैसा हाउजिङ, जग्गा लगायतका स्थानमा लगाएका थिए । त्यहिँबाट उनको पतन शुरु भएको थियो ।